Ranesa Firiana: “Mila miala ny filohan’ny Antenimierampirenena” | NewsMada
Ranesa Firiana: “Mila miala ny filohan’ny Antenimierampirenena”
Tokony hametra-pialana sa tsia ny filohan’ny Antenimierampirenena amin’ny maha kandidà ho filohan’ny Repoblika azy izao? Adihevitra be… “Mila miala ny filohan’ny Antenimierampirenena”, hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana.
“Mametraka ny lalàna velona eto amin’ny firenena malagasy fa mahazo mirotsa-kofidina ny olom-pirenena tsirairay avy amin’izay fifidianana rehetra ahazoany mirotsaka. Anisan’ny olom-pirenena ny filohan’ny Antenimierampirenena amin’izao fotoana izao. Manana zo feno hirotsaka ho kandidà ho filohan’ny Repoblika izy.”
“Inona ny fepetra tokony ho fantatra amin’izay maha kandidà ny filohan’ny Antenimierampirenena izay?”, hoy àry ity mpahay lalàna ity. Voalohany, mametraka ny lalàna velona eto Madagasikara fa tsy manan-jo hanao fampielezan-kevitra ny filohan’Andrimpanjakana. Nefa tsy maintsy hanao fampielezan-kevitra ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean-Max , rehefa nisafidy nirotsaka ho kandidà ho filohan’ny Repoblika.